I-Intel iya kubamba phantse zonke iiprosesa zayo zokuphelisa iSpecter kunye neMeltdown | Iindaba zeGajethi
Impikiswano iyaqhubeka nokushukumisa i-Intel, Isikhalazo malunga nokusilela kwezokhuseleko ezinokuthi zichaphazele iimveliso zazo kwihlabathi liphela kwaye zinciphise indlela ezisebenza ngayo kwiikhompyuter ziyabaphoxa abasebenzisi abaninzi. Ngokuchanekileyo ezi ndaba zibambe i-Intel ngeeyure ezisezantsi, ukuwa kwintengiso yePC kunye nokuziqhelanisa kwayo okungalunganga kwihlabathi leefowuni eziphathwayo kuyabhatala.
Ngokwolwazi olusemthethweni, I-Intel iya kubamba zonke iiprosesa ezingaphantsi kweminyaka emi-5 ukuphela kwenyanga ukuphelisa iMeltdown kunye neSpecter, kwaye asikacaci ncam okwangoku ukuba oku kuya kuzichaphazela njani izixhobo ezindala.
Ngaphandle kwento yokuba u-CEO wefemu, uBrian Krzanich, uxele ukuba i-90% yeeprosesa ezingaphantsi kweminyaka emihlanu ubudala sele ihlaziyiwe ngesiqwengana esisombulule le ngxaki, yena ngokwakhe ubone kufanelekile ukwazisa amajelo eendaba ukuba i-Intel izakuqinisekisa ukuba i-10% eseleyo nayo ifumana uhlaziyo ukuze ingabinakujongana nengxaki yezokhuseleko kwihlabathi jikelele esidibene nayo. Ngokwethiyori, nantsi indlela eya kuthi ekugqibeleni impikiswano iphele kwaye olu lwaphulo-mthetho luza kutywinwa ngokupheleleyo, ubuncinci ukuba ngubani ongakhange asombulule ingxaki unexesha.
Ukugxekwa kukuba olu hlaziyo lunakho Ukunciphisa umda kumandla weprosesa okanye kuchaphazele ukusebenza, ngakumbi kwabo badala, phantse ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-30 zizonke, ke bayazithethelela:
Silindele ukuba ezinye zibe nefuthe elikhulu kunabanye, ke siza kuqhubeka nokusebenza nomzi-mveliso ukunciphisa ifuthe kumthwalo wokusebenza ngokuhamba kwexesha.
Akukho nto sinokuyenza ngaphandle kokungxamela ukuhlaziya izixhobo zethu kwaye silungiselele oko basinika kona kwaye sizame ukuzikhusela ngezixhobo esinazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Intel iya kubamba phantse zonke iiprosesa zayo zokuphelisa iSpecter kunye neMeltdown
Ukucoca ezinye iiteki zeAdidas ezivela kwiDrag Ball Z